नेपालमा सबैभन्दा बढी प्रदेश २ मा कुष्ठ रोग प्रभावित
२०७५ माघ १३ आइतबार, काठमाडौं। नेपालले कुष्ठरोगलाई जनस्वास्थ्य समस्याबाट राष्ट्रिय स्तरमा निवारण भैसकेको सन २०१० मा घोषणा गरे पनि देशका बिभिन्न भागमा अझै पनि बर्सेनी लगभग ३ हजारको हाराहारीमा नयाँ कुष्ठरोगी देखापर्ने गरेको कुष्ठरोग नियन्त्रण तथा अपाङ्गता शाखाले जनाएको छ। ... बाँकी अंश»
शिक्षण अस्पतालभित्र तनाव
२०७५ माघ १३ आइतबार, काठमाडौं । शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जभित्र तनाव भएको छ । आवासीय चिकित्सकहरुले १९ दिनदेखि आमरण अनसनरत डा गोविन्द केसीको पक्षमा प्रदर्शन गर्न खोज्दा स्थिति तनावपूर्ण बनेको हो । ... बाँकी अंश»
प्रजातन्त्रवादी आयुर्वेद चिकित्सक संघमा अधिकारीको नेतृत्व
२०७५ माघ १२ शनिबार, काठमाडौं। प्रजातन्त्रवादी आयुर्वेद चिकित्सक संघको प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ। महाधिवेशनले संघको नँया कार्यसमिति पनि चयन गरेको छ। ... बाँकी अंश»
डा. केसीको अनशन जारी रहेसंगै चिकित्सकहरूको आन्दोलन पनि जारी
२०७५ माघ १२ शनिबार, काठमाडौं। सरकारले चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गरेकोमा आपत्ति जनाउदै डा. गोबिन्द केसीले अनशन जारी रहने बताए। प्रधानमन्त्री केपी ओलीको राजीनामा माग गर्दै नेपाली नागरिकमाथि सुनियोजित धोका भएको अनशनस्थलबाट डा. केसीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। ... बाँकी अंश»
पहिलो पटक एम्बुलेन्स दिवस मनाइयो
२०७५ माघ ११ शुक्रबार, काठमाडौं । नेपालमा पहिलो पटक ‘एम्बुलेन्सलाई पहिलो प्राथमिकता दिउँ’ भन्ने नाराका साथ एम्बुलेन्स दिवस मनाइएको छ । ... बाँकी अंश»
डा केसीको जीवन रक्षा गर्न सरकारलाई चिकित्सक संघको अल्टिमेटम
२०७५ माघ ११ शुक्रबार, काठमाडौं । आमरण अनसनरत डा गोविन्द केसीको जीवन रक्षा गर्न नेपाल चिकित्सक संघले सरकारलाई ७२ घन्टे अल्टिमेटम दिएको छ । ... बाँकी अंश»
उपत्यकामा मौसमी रुघाखोकीको संक्रमण, पाँचको मृत्यु
२०७५ माघ १० बिहिबार, काठमाडौं। उपत्यकामा पछिल्लो दुई महिनामा मौसमी रुघाखोकीको संक्रमणका कारण पाँच जनाको मृत्यु भएको छ। इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका डा प्रकाश साहका अनुसार पुस महिनामा एक जना र माघ महिनामा ४ जनाको मौसमी रुघाखोकीका कारण ज्यान गएको पुष्टि भएको छ। ... बाँकी अंश»
‘हात नमिलाई नमस्कार गरौँ’
२०७५ माघ १० बिहिबार, काठमाडौँ । चिसो बढेसँगै मौसमी रुघाखोकी (सिजनल इन्फ्लुएञ्जा) का बिरामीको सङ्ख्या बढको छ । ... बाँकी अंश»
कुन चिया पिउँदा कस्तो बेफाइदा
२०७५ माघ १० बिहिबार, काठमाडौं । सामन्य रुपमा पुदिनाको चिया पिउनु स्वस्थको लागि राम्रो मानिन्छ । क्याफिन रहित हुनुका साथै पुदिनाको चिया प्रतिरक्षा तन्त्र मजबुद बनाउन सहयोग गर्छ । तनाब र थकान कम गर्न पनि पुदिनाको चिया प्रभावकारी मानिन्छ । पुदिनाको चिया पिउनाले फाइदा मात्र नभइ बेफादा पनि छन् । ... बाँकी अंश»
नेता भरतमोहनलाई सिसियूमा सारियो
२०७५ माघ १० बिहिबार, काठमाडौं । नेकपा नेता भरतमोन अधिकारीलाई सिसियूमा सारिएको छ । पूर्वउपप्रधानमन्त्री समेत रहेका नेता अधिकारीको ... बाँकी अंश»
डा केसीको जीवन रक्षा गर्न मानव अधिकार आयोगको आग्रह
२०७५ माघ ८ मंगलबार, काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षामा सुधारको लागि राष्ट्रिय नेपाल सरकारसँग विगतमा भएका सम्झौताहरुको कार्यान्वयनको माग राखी १४ दिनदेखि आमरण अनसनरत प्रा डा गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था प्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ध्यानाकर्षण जनाएको छ । मंगलबार आयोगका सचिव वेद भट्टराईले विज्ञप्ति जारी गर्दै ध्यानाकर्षण जनाएका हुन् । ... बाँकी अंश»
काठमाडौं उपत्यकामा स्वाइन फ्लुको संक्रमण, १६८ जनामा प्रमाणित, वास्तविक स्थिति अझ जटिल
२०७५ माघ ८ मंगलबार, काठमाडौं । राजधानीमा स्वाइन फ्लुको संक्रमण बढेको छ । राष्ट्रिय प्रयोगशाला टेकुका अनुसार मंसिरदेखि पुस २६ सम्म ३ सय ३४ जनाको घाँटीको र्यालको नमुना परीक्षण गर्दा एक सय ६८ जनामा संक्रमण भेटिएको हो । ... बाँकी अंश»
यसरी खाने करेला
२०७५ माघ ७ सोमबार, एजेन्सी । मधुमेहका बिरामिलाई औषधीनै हो करेला । मधुमेह हुनेलाई करेलाको सब्जी जुस र विशेष गरेर धुलो धेरै प्रभावकारी हुन्छ । करेला अग्नाशायलाई उत्तेजित पारेर इन्सुलिनको स्त्रावलाई बढाउछ । करेलामा प्रयाप्त मात्रामा इन्सुलिन पाइन्छ । सो इन्सुलिन पिसाब र रगत दुबैलाई नियन्त्रणमा राख्ने गर्दछ । हेरौ मधुमेहमा करेलाको प्रयोग कसरी गरेर डाइविटिजबाट राहात पाउन सकिन्छ । ... बाँकी अंश»
शिशु पेटमा भएकी महिलाको लागि स्याउ अमृत समान, यस्ता छन् फाइदा
२०७५ माघ ६ आइतबार, काठमाडौं । गर्भावस्थाको बेला हरेक महिलाले आफ्नो आहारको बारेमा धेरै सावधानी आपनाउन आवश्क हुन्छ । यस्ता धेरै खानेकुराहरू छन् जुन गर्भवती स्त्रीको लागि उपयुक्त भए तापनि उचित मानिदैन। तर स्याउ यस्तो फल हो जसलाई प्रत्येक गर्भवती महिलाले आहारमा समावेश गर्नुपर्छ। यसले गर्भवती स्त्रीलाई धेरै तरिकामा लाभ दिन्छ। ... बाँकी अंश»
२०७५ माघ ६ आइतबार, काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले मिर्गौला रोगको निःशुल्क उपचार सेवा (डायलाइसिस) विभिन्न १६ जिल्लामा विस्तार गर्ने भएको छ । ... बाँकी अंश»
विराट मेडिकल कलेजमा चमत्कारीक शल्यक्रिया
२०७५ माघ ६ आइतबार, मोरङ । विराटनगरमा अवस्थित विराट मेडिकल कलेजले एक युवकको चमत्कारीक शल्यक्रिया गरेको छ । टाउको भित्र गाडिएको ४ सेन्टिमीटर लामो फलामको टुक्रालाई शल्यक्रिया मार्फत सफलता पुर्वक निकालिएको हो । ... बाँकी अंश»
मिठो लाग्ने यी खानेकुरा खाए छिट्टै लाग्नसक्छ क्यान्सर
२०७५ माघ ४ शुक्रबार, काठमाडौं । क्यान्सर प्रणघातक रोग मानिन्छ । यो रोग विभिन्न कारणले लाग्छ । जसमध्ये केही मात्रामा मानिसहरुको खानेकुरा पनि एक कारण हो । त्यसैले क्यान्सरबाट बच्न खानेकुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । यहाँ क्यान्सरको जोखिम भएका केही खानेकुराहरु उल्लेख गरिएको छ । ... बाँकी अंश»
जाडो मौसममा कुन सुप खाने ?
२०७५ माघ ४ शुक्रबार, टोफूको सुपले ऊर्जा बढाउछ र मधुमेहका रोगीले पनि खानु उपलब्धि मुलक छ । सुपले कोलेस्ट्रोल, उच्च रक्तचाप कम गर्दछ। भटमासबाट बनेको यसमा सलाद पात, मसिनो आकारमा काटिएको तरकारी र सुन्तला रस मिश्रित हुन्छ । ... बाँकी अंश»
उमेर नपुग्दै आमा बन्छन् हुम्लाका किशोरी
२०७५ माघ ३ बिहिबार, हुम्ला । प्राय उमेर नपुग्दै आमा बन्ने गर्दछन हुम्लाका किशोरीहरु बाल विवाह गर्नु कानुन बिपरीत भएपनि यसको ब्यवास्ता गर्दै बाल विवाह गर्दै आएका छन । यस्तै बाल विवाहको शिकार हुन् पुगेकी सर्केगार्ड गाउँपालिका ३ स्थित उनापानी गाउँकी मनमति सार्की । उनि उमेरले १६ वर्ष पुरा भएर १७ टेक्न थालेकी छन । तर १७ बर्ष पुग्न नपाउदै २ सन्तानकी आमा बनिसकिन मनमती । ... बाँकी अंश»
२०७५ माघ १ मंगलबार, काठमाडौँ । नेपाली औषधि बजारको करीब ३० प्रतिशत हिस्सा विदेशी औषधि उद्योगबाट उत्पादित दर्ता विनाका औषधिले बजार जमाइरहेका छन् । ... बाँकी अंश»